people Nepal » किन चाहँदैन भारत १९५० को सन्धिकाे पुनरवलोकन ? किन चाहँदैन भारत १९५० को सन्धिकाे पुनरवलोकन ? – people Nepal
किन चाहँदैन भारत १९५० को सन्धिकाे पुनरवलोकन ?
Posted on July 26, 2017 by Tara Nidhi
साउन ११,काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य महेन्द्र पी. लामाले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले के परिमार्जन गर्न चाहेको हो भन्ने प्रस्ट पार्न नसकेको बताएका छन् ।